Social Media ကနေ Marketing ပိုင်းပါတွဲလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးနေပါသလား? -
Social Media ကို Entertainment အနေနဲ့ပဲ အသုံးပြုနေလား? ဒါမှမဟုတ် Marketing အတွက်အသုံးပြုဖို့ အတွက်ပါ စိတ်ကူးထားသလား? ဒါဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရာက သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…
အထက်က အချက်တွေကိုဖတ်ပြီး Social Media မှ Social Media Marketing သို့ပြောင်းလဲလာပုံနဲ့ အရေးပါပုံတွေကို သိရှိနားလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အခြား Social Media Marketing နဲ့ Digital Marketing အကြောင်းတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ SEOMyanmar မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ ဒီဇင်ဘာ 19, 2019/ Blog/0Comment